Cortana - ဝီကီပီးဒီးယား
ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၄; ၇ နှစ် အကြာက (၂၀၁၄-၀၄-02)
Cortana သည် Intelligent Personal Assistant (IPA) ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ ဖန်တီးထားပြီး မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုး ၁၀၊ ဝင်းဒိုး ၁၀ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ဝင်းဒိုးဖုန်း ၈.၁ (ယခု Bing Mobile ဖြင့်အစားထိုးထား) ၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Band, Xbox One, iOS နှင့် အန်းဒရိုက်တို့တွင် အသုံးပြုထားသည်။
Cortana သည် ကီးဘုတ်မှစေခိုင်းမှုမပါဘဲ အသံများကို မှတ်ထားနိုင်ခြင်း၊ နှိုးဆော်သတိပေးမှုများ ထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် Bing (ဘင်း) ရှာဖွေမှုစနစ်မှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုကာ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးနိုင်သည်။
Cortana သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲ၏ အမျိုးအစားနှင့် နေရာဒေသကိုမူတည်၍ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ တရုတ်၊ ဂျပန် ဘာသာစကားများ ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Cortana သည် အဂိကအားဖြင့် လက်ထောက်အကူအညီ (assistant) ဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်သည့် Apple's Siri, Google's Google Assistant, Samsung's Bixby, and Amazon's Alexa ကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Japanese Japan Standard Japanese Available
ortana ၏ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အလုပ်လုပဆောင်နိုင်စွမ်းသည်Tellme Networks မှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ Tellme Networks ကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ Cortana သည် Satori ဟုခေါ်သည့် Semantic Search database နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
↑ Lau၊ Chris။ "Why Cortana Assistant Can Help Microsoft in the Smartphone Market"၊ March 18, 2014။ 8 April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 September 2014။
↑ Risley၊ James (March 30, 2016)။ Microsoft introduces Cortana-powered chatbot for Skype, opening up framework to developers.။ Geek Wire။
↑ Callaham၊ John (December 9, 2015)။ Microsoft's Cortana digital assistant officially launches on Android and iPhone။ Windows Central။ December 9, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Foley၊ Mary Jo။ "Microsoft's 'Cortana' alternative to Siri makesavideo debut"၊ March 4, 2014။
↑ Martin၊ Julia။ "Microsoft brings Cortana to wrists with $199 Microsoft Band"၊ October 30, 2014။
↑ Griffiths၊ Sarah။ "Microsoft joins the world of wearables: New Band monitors your fitness levels and sleep quality for $199"၊ October 30, 2014။
↑ Whitney၊ Lance။ "Microsoft's Cortana crosses over to iOS and Android. Due out this year for Android and iOS, the voice assistant will bring some competition to Apple's Siri and the Google Now app."၊ May 26, 2015။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ Cortana's regions and languages။ July 29, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Novet၊ Jordan။ "Cortana will land in China and the United Kingdom in the coming weeks"၊ June 25, 2014။
↑ Cortana arrives in the UK on Android and iOS with an overhauled design - The Verge
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Duckett၊ Chris (November 13, 2015)။ Hobbled Cortana arrives in Canada, Australia, Japan, and India. As part of the latest update to Windows 10, Microsoft's digital assistant has arrived inanumber of new geographies.။ ZDNet။
↑ Windows 10 update: Cortana now understands Indian accent။ The Indian Express (November 13, 2015)။
↑ Whitney၊ Lance။ "Microsoft Cortana expands to French, Italian, German and Spanish"၊ December 5, 2014။
↑ Surur၊ Author။ "Cortana's Italian improves"၊ February 2, 2015။
↑ Hernandez၊ Pedro။ "Cortana Goes Globetrotting in European Alpha"၊ December 5, 2014။
↑ Shanahan၊ Dave (March 4, 2016)။ Cortana App for iOS now available in Japan.။ WinBeta။
↑ Gary Marshall။ Cortana: everything you need to know about Microsoft's Siri rival။ TechRadar။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Cortana&oldid=623104" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။